May 28, 2020 1434
४५ दिन अगाडी गोर्खाका अमृत थापा मगर बेप’त्ता भए । चैतको २८ गते हराएका उनी ४५ दिन पछि फेला परे । तर निध’न भइसकेको अवस्थामा । उनी चिन्नै नसकिने अवस्था’मा फेला परेका थिए । उनले चेन र कपडाका आधा’रमा परिवारले सनाखत गरेका हुन् ।
गण्डकी अस्पतालमा शव लगेर राखेको छ । उनी लामो समय पोखरामा बस्दै आएका थिए । माइक्रोवसमा सहायकको रुपमा काम गर्ने उनी ४५ दिन अघि साथीसंग माछामा’र्न भन्दै सेती नदिमा गएका थिए । उनी त्यतै बिलाए ।
४५ दिन सम्म खोज्दा बल्ल उनी फेला परे । उनको परिवारमा आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । उनको परिवारमा दिदी र बहिनी छन् । अमृतको श’व फेला परेपछि उनको श’रिर ढाक्ने प्लाष्टिक नभएपछि एकजना बहिनीले मुस्किलले त्यसको ब्यवस्था गरेकी थिइन् ।
एम्बुलेन्समा शव अस्पताल सम्म लैजाने भाडा नहुँदा पनि निकै अप्ठेरो भयो । भाडामा बस्दै आएका उनीहरुसंग शव ढाक्ने प्लाष्टिक नभएपछि त्यसको पैसा पनि मागेर तिर्नु परेको फुपुले बताए’की छन् । एम्बुलेन्सलाई दिने २५ सय पनि अरुवाटै उठाएको बताएका छन् ।
लकडाउनका कारण आर्थिक समस्या’मा परेका उनीहरु छोराको शव अन्त्य’ष्टि गर्न र कात्रो किन्ने पैसा पनि सहयोग माग्नु परेको छ । उनीहरुले कात्रो किन्ने पैसा समेत नभएपछि उनीह’रुले सहयोगको याचना गरेका छन् ।
तीन दिदी र एक बहिनी भएका अमृ’तको दिदीहरुको विवाह भइसकेको छ । एउटी बहिनीको ब्यवहार पनि उनले नै हेर्दै आएका थिए । बुवा आमा कोही नभए’का उनीहरु आफ्नो पेट पाल्ने पै’सा कमाउन गाडीमा हिड्ने गरेका थिए ।
आमावुवा गुमाएका उनी वहि’नीलाई विदेश पठाउने योजनामा थिए । त्यसका लागि पनि उनले पैसा जोगा’उने गरिरहेका थिए । आफ्नो एक्लो दाई गुमाएकी बहिनी वि’छिप्त भएकी छन् ।
उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । एउटै सहा’रा दाई गुमाएकी बहिनी ४५ दिन सम्म रोएर विता’एकी छन् । निकै अप्ठेरोमा परेकी ति वहिनीलाई सहयोग जुटाउन अन्य स्थानियले पनि आग्रह गरेका छन् ।
बहिनीको भविष्य राम्रो बनाएर भोलीको दिन सुख’दसंग विाताउने अमृतको चाहना बिचैमा टुटे’को छ । उनको त्यस्तो अवस्था देखेपछि छिमेकीले केही सहयोग पनि गरेका छन् । तर ति वहिनीको जिवन भने निकै लामो छ । दाजु विनाको त्यो लामो जिवन अब उनले एक्लै विता’उनु पर्ने छ । भिडियो.. हेर्नुहोस….
Prevआज जेठ १५ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्….
Nextडलरको भाउ बढ्यो, अन्य देशको मुद्राको भाउ समेत बढ्यो…
आज सुन चाँदीको भाउ कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्….
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, नेपाली बजारमा सुनको भाउ कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्